Home Wararka Gaari xalay ku dilay dad shacab banaanka maqaayad ku taalla isgoyska Shaqaalaha
Gaari xalay ku dilay dad shacab banaanka maqaayad ku taalla isgoyska Shaqaalaha
Inta la xaqiijiyey hal qof ayaa dhintay halka 5-qof ay dhaawacmeen, kadib markii gaari nooca raaxada ah oo bareeg-goostay uu xalay abbaaro 12 habeenimo oo daqiiqado la’ jiiray dad ku caweynayey banaanka maqaayad ku taalla isgoyska Shaqaalaha ee Muqdisho.
Xiliga uu shilkan dhacayay ayaa Gaariga la sheegay in markii hore uu si xawli ah uga soo gubdbay jeckpoint ka agdhawaa maqaayadda ay dadkan fadhiyeen.
Gaadiidka gurmadka deg deg ah ayaa daqiiqado kadib soo gaaray goobta iyada oo Dadkii dhaawacmay loo qaaday idbitaalada magaalada Muqdisho.
Laamaha amniga ilaa iyo hadda wax war kama soo saarin falkan, waxaa xusid mudan in shilalka noocaan ah oo kale ay xiliyada qaar ay ka dhacaan magaalada Muqdisho.
Previous articleXulushada kuraas ka mid ah Golaha Shacabka oo ka socota Baledweyne
Next articleAl Shabaab oo soo bandhigtay wariye ka tirsanaa mid kamid ah telefishinada Soomaalida
Dowlada Soomaaliya oo war kasoo saartay weerarkii New Zealand